Okwu | Mytrickstips
Home // Usoro
ỤLỌ ọrụ - ỌTỤ
Biko gụọ 'Usoro nke Ọrụ' nke ọma tupu iji weebụsaịtị anyị. Site na ịnweta ma ọ bụ na-eji weebụsaịtị anyị, ị na-enye anyị ikikere gị ịkekọrịta ma jiri ozi edoro anyị na saịtị anyị. Dị ka okwu nke ọrụ anyị, ị bụ 'kwenye' na 'ịnakwere ' na usoro ndị a site n'iji weebụsaịtị anyị n'ụzọ ọ bụla.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere ike inwe njikọ dị iche iche na saịtị ndị ọzọ. Anyị enweghị njikọ na nke ọ bụla n'ime ebe nrụọrụ weebụ ndị a. Ọzọkwa, ihe niile na logos metụtara dị BỤGHỊ nwekwa ma na-achịkwa anyị. Njikwa na ịchịkwa ikike ọgụgụ isi dị n'aka ndị nwe ha. Anyị anaghị ewere ọrụ ọ bụla metụtara ha.
Enweghị akụkụ nke mkpokọta weebụ anyị iji nye ụdị ụdị nkwenye ma ọ bụ ikike. Anyị agaghị enwe nsogbu maka ụdị mmebi ọ bụla ma ọ bụ azụmahịa gị n'ihi nleta ma ọ bụ iji saịtị anyị maka nzube ọ bụla. Anyị anaghị eme ihe ọ bụla e gosipụtara ma ọ bụ gosipụta maka ozi na ọrụ anyị na-enye na saịtị anyị.
Anyị debere ikike iji dozie nsogbu ọ bụla na ọdịnaya anyị na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị inye ọkwa ọ bụla. Anyị anaghị ekwenye mgbe niile na a ga-edozi njehie ozugbo. Ọzọkwa, anyị anaghị ekwe nkwa na ebe nrụọrụ weebụ anyị ga-adị n'oge niile. Ozi dị na saịtị anyị abụghị akwụkwọ iwu ma kwesịghị ile ya anya dika iwu, ego, ma ọ bụ enyemaka ahụike. Ihe e bipụtara bu maka ihe ọmụma naanị ma ọ bụghị ihe mgbakwunye maka oge ọkachamara.
Ị na-eji weebụsaịtị anyị n'ihe ize ndụ gị. Anyị enweghị ụgwọ ọrụ ọ bụla ga - esi na ya pụta ma ọ bụ n'ihe metụtara ọrụ anyị ma ọ bụ weebụsaịtị anyị n'ụdị ma ọ bụ ụdị ọ bụla. Onus bụ 100% nke gị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na saịtị anyị ekwupụtalarị na ị ga-efu. Ị kwenyere BỤGHỊ ka anyị nwee ike ịza ajụjụ maka ụdị ọnwụ ọ bụla, mmebi, ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ bụ kpọmkwem, na-enweghị isi, ma ọ bụ na-aba uru.
Ọ bụ ezie na a na-eme mgbalị niile iji hụ na ozi dị na weebụsaịtị anyị ziri ezi, anyị anaghị akwado ikike zuru oke ma ọ bụ izu ezu ya. Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime mkpochapụ nke weebụsaịtị a; (a) Meechi ma ọ bụ wepu gị ma ọ bụ ụgwọ anyị maka mmerụ onwe gị ma ọ bụ ọnwụ na-ebili n'ihi enweghị nlezianya. (b) Debe ma ọ bụ wepu gị ma ọ bụ ọrụ anyị maka aghụghọ nke ụdị ọ bụla. (c) Debe ma ọ bụ wepu gị ma ọ bụ ụgwọ ọrụ anyị megide ihe ọbụla na-akwadoghị. (d) Debe ma ọ bụ wepu gị ma ọ bụ ụgwọ ọrụ anyị nke a na-agaghị ewepụ n'okpuru iwu dabara.
Anyị na-enye usoro ọrụ anyị naanị na Bekee. Site n'iji weebụsaịtị anyị, ikwetara na Okwu nke Service wepụta site anyị bụ ezi uche. Ọ bụrụ na ikwenyeghị, a gwara gị ka ị ghara iji weebụsaịtị anyị. N'okpuru ọnọdụ ọ bụla, ị ga-anọgide na-eji saịtị anyị ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro niile nke ọrụ anyị.
Dị ka onye nweere onwe ya na nke a kpaara ókè, anyị nwere ikike ọ bụla iji chebe ma kpachie ụgwọ nke anyị. Ya mere, buru n'uche otu ị si eji ebe nrụọrụ weebụ anyị. Dịka ọnọdụ nke eji, ị kwenyere na ị gaghị eweta nkwupụta ọ bụla megide weebụsaịtị anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị maka ihe ọ bụla ma ọ bụ mmebi ị nwere ike ịta ahụhụ na njikọ nke weebụsaịtị anyị. N'otu aka ahụ, ị ​​kwenyere na Usoro nke Ọrụ bụ ihe ọmụma zuru ezu n'aka gị iji kweta na iwepụ akwụkwọ weebụ anyị ga-echebe anyị na ndị ọrụ anyị megide ebubo ọ bụla e boro anyị.
Enweghi ike ime ndokwa
Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla nke nkwekọrịta nke ebe nrụọrụ ahụ adịghị adaba na iwu ahụ dị, ọ gaghị emetụta nkwenye nke usoro ndị ọzọ nke ọrụ a depụtara na ibe a. Ọzọkwa, anyị na-ewepụ ụgwọ niile sitere na saịtị ọ bụla ọzọ nke metụtara anyị n'ụzọ ọ bụla. Anyị na-arụ ọrụ dị ka nwoke n'etiti mmadụ iji nye ndị nleta koodu n'efu. Anyị anaghị etinye aka ma ọ bụ jikọtara ya na njirimara nke onwe nke saịtị ndị ọzọ.
A na-enye ọrụ n'efu anyị / ozi "dị ka" enweghị akwụkwọ ikike ọ bụla ma ọ bụ ụdọ ọ bụla. Ya mere, anyị anaghị ekwe nkwa na ngwọta anyị nyere ga-arụ ọrụ n'oge niile. Anyị bu n'obi inye gị onyinye Koodu n'efu, ma anyị enweghị ike ikwere na koodu ahụ ga-arụ 100% nke oge. Ọzọkwa, ị ghaghị ikweta iji mezue usoro ndị dị mkpa iji kpọghee koodu ahụ, nke nwere ike ịchọ ka ị rụchaa nyocha n'ọtụtụ ọnọdụ. Ruo n'ikike anyị nwere, anyị na-anwa ịchọta nyocha ọhụụ "ọ dịghị efu," mana ọ bụ mba. Ya mere, ego ọ bụla metụtara nyocha ahụ adịghị adabere n'ọchịchị anyị.
Anyị nwere ikike ịgbanwe agbanwe na "Usoro nke Ọrụ" n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Ọ bụ ọrụ onye ọrụ iji dochie anya mgbanwe ndị dị ugbu a. Onye ọrụ ahụ ga-achọta usoro na ọnọdụ a gbanwere na ibe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọzọ banyere usoro nke ọrụ na weebụsaịtị anyị, nweere onwe gị ka ịkpọtụrụ anyị.